Top 4 emulators kulan Windows Phone 8
Waxaa ka booday igu sidii Dabayaaqadii in qof walba ma aqoonsan waxa emulator ah ama sida ay u isticmaali mid. Gaar ahaan ka mid ah ayaa isagana ka Console iyo shaqsiyaadka kale ee aan kumbiyuutarada adeegsadaa in ay sida xad. Gamer kasta la PC ah waajibka ku ah inay ku gartaan si loo isticmaali emulator ah, si this post la doonayo inuu kuugu adeego sidii bandhig loogu talagalay dadka u baahan
In la eg tahay, emulator ah waa qalab ama barnaamijyada in awood hal-dhismeedka PC (loo yaqaan oo ciidankii) si ay u fuliyaan sida nidaamka PC kale (oo la yidhaahdo booqdaha). Emulator An caadi awood qaabka marti ordi barnaamijyada ama u isticmaalo qalabka faraqa maradiisa oo loogu tala galay qaabka booqdaha ah.
Taasi codadka xoogaa gaar ah, sidaas darteed halkan aan cadeeyo
Emulators yihiin mashaariicda ciyaaro waxey Console xaq aad kombuutarka.
3. EmiGens More
5. Dagaalka Solar
1. EmiPSX: ku Playstation emulator ugu horeysay ee Windows Phone 8
Price 3,99; rating 4.1 xiddigaha
Dhowr bilood ka dib baaritaanka, Andre ee Playstation One emulator EmiPSX ayaa haatan ku nool yihiin dukaanka Phone Windows waxaa jaban $3.99 oo lagu qiimeeyo 4.1 xiddiga dukaanka daaqadaha. Emulator ayaa si dhab ah oo xayiraad la mid ah oo ma ordi karaan waxey xawaare buuxda oo ku saabsan hadda qalabka Windows Phone 8, weli waxaa weli dheecaan ah oo si gaar ah dhiirigelinta taageerayaasha eyelid Playstation. Madaxa Waxa la soo dhaafay qeybtii sahanka buuxa la video!
EmiPSX taageeraan sawirka iyo muuqaalka labadaba. Sida aad fili lahaydba, muuqaalka dhirta si weyn dheeraad ah oo kaamil ah ay sabab u tahay aragtida ay ka weyn waxay bixisaa.
Ugu weyn ee video doorasho dhab ah in la ogaado waa ku kala dooran karo "Kala" iyo gobolada "FullScreen". Wixii xaaladan, muuqaalka dhirta runtii waddaa leexsado ee gaarka ah 1:33 aragtida tiro (ama sida ay u dhow sida si macquula ay filanayaan karin), kaas oo Addomahaaga video lahaa qaybta ugu alleefidda sida shaashad buuxda ama pillarboxed.
The "FullScreen" doorashada waa mid ka mid ah in si dhab ah u kordhiyay sawirka si ay ugu ekaato shaashadda telefoonka oo dhan ee. Tani waxay ka eegi kartaa OK in muuqaalka, si kastaba ha ahaatee ma aha in sal-dhigida ee sawirka. Tan iyo hab tani waxaa la fidiyaa bandhigay iyo ma aan beddeli, ahaan u sii garanaya wax for "FullScreen" in loogu yeedho "Kala."
Hore in, kontaroolada muujiyaan isbedel ku tuntay barbar Andre ee emulator ee la soo dhaafay. Waayo, mid, qabsado default iyo d-barkin runtii kuwa xukuma Playstation ah eg. Users sidaas oo bedeli kartaa in a "Maqaarka fudud", taas oo ay gacanta ku saabsan-screen u hesho in ay noqon Qaababka cad aasaasiga ah (bandhigay hore). Si kastaba ha ahaatee, waxay si fudud u eegto lacagta sida weyn oo ka sarreeya si ay gacanta ku xun EmiGens '.
Isbedel kale oo ay gacanta ku weyn EmiPSX waa MOGA Support Pro maamusha! Taas ayaa ka dhigaysa tan shanaad Windows Phone 8 dheeldheel / codsiga in la dheeraad ah shaqeeyaan, iyo emulator labaad ee ay qaban lahaayeen sida (EMU7800 waa ugu horreeyey). Mar kale, ma waxaan ku xukuma ah si ay u tijaabiso taageero, weli waxaa waajib ah inaad u samaysaa aragnimo play fiican fikirtay badan gacanta ku screen taabto.
2. EMU7800: emulator ugu horeysay ee Windows Phone la MOGA taageero maamusha Pro
In la soo dhaafay xad dhow, Spectral Naftooda galay labaad Windows Phone 8 dheeldheel la MOGA Pro maamusha taageero u noqday. Firaaqada More shaki la'aan ah ka dib markii uu qaadan doono, si kastaba ha ahaatee ma at isagana ka orod badan tahay lahaa jeclahay. Hesitance soo saare MOGA Power A ayaa si rasmi ah u aqoonsado Windows Phone 8 ee wax u labeeyo Arsenal oo kor u qaadida qalabka sida caadiga ah ayaa keenay in uu cadaanyo qandac ah ka Windows Phone injineerada, oo ay ku jiraan Gameloft ah si gaar ah muhiim.
Waxaan guud ahaan kor u xajin emulators waa meesha Pro MOGA ee maamusha ayaa ugu imaan karta ee Windows Phone 8. Waxaa murugo leh, ma jiro oo ka mid ah Nintendo ama Sega emulators u xoojiyo weli. Weliba, waxaan sida Dabayaaqadii ogaaday in ku dhowaad hal falaa: EMU7800 ka Mike Murphy. An Atari 7800 iyo 2600 emulator ma aha isticmaalka ugu tamar $ 50 xukuma ah oo dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee waxa ee bilaabaan!
Laftiisa EMU7800 waxaa la sugayay emulator for Windows Phone 7 iyo 8, si kastaba ha ahaatee ay u jecel yahay sharciga copyright iyo dhowr geesaha adag bedeli baahan. Madaxa Waxa la soo dhaafay nasashada ee dareenkaa noo buuxa!
Waa app oo lacag la'aan ah oo lagu qiimeeyaa 4.5
EmiGens waa Genesis / SMS / GG / Sega emulator CD u Symbian iyo Windows Phone! Play horyaal aad ugu jecel yahay, tudhi doono horumarkiinna mar kasta oo ay soo noqdaan in flash ah meesha aad iska baxo.
1. qaaday sawirka iyo Muuqaal ay ciyaareyso ay
2. caadiga ah iyo sawirka FullScreen
3. Great Dhignaashada.
Fiiro gaar ah : EmiGens u baahan ROMS dheeldheel Genesis / SMS / GG / SegaCD (.bin, .smd, .sms, .gg, .iso, .flash) si ay u shaqeeyaan. Waa kuma jiraan ROMS kasta oo raalli kama aha dhac. Waxaad ka heli kartaa ROMS iyada oo loo marayo xoojinta aad rasaasta ama albums gaar ah. On Windows Phones aad ka card SD ee qabanqaabada ku shuban kartaa ROMS .receptacle, .smd, .sms, .gg (ISO iyo zip yihiin daboolan oo ay OS ah), ka OneDrive qaabab oo dhan waxaa taageera (.bin, .smd,. sms, .gg, .iso, .zip) oo ka download toos ah web likeemail xiriir.
Taageerayaasha ciyaaraha Wanaagsan jecel emulators sabab ah in ay noo oggolaadaan inay ku soo laabtaan si ay u curiso waxey ka badan aasaasay oo ku saabsan qalabka aan hadda haysanno. Waa maxay dheeraad ah, fursad off in aad ku faraxsantahay dayanayaan on Windows Phone 8, aad u badan tahay xeel dheer shaqada ee injineer aan caadiga Mar. uu sida hadda soo bandhigay in ay na laba emulators cajiib ah: Snes8x (a emulator Super Nintendo) iyo VBA8 (a emulator GameBoy Advance).
VBA8 waa mid cajiib ah, waayo, ku weheliyana iyo dudettes kuwaas oo u baahan inuu u ciyaaro wakhtiga firaaqada GameBoy Advance on Windows Phone ay 8 qalabka, si kastaba ha ahaatee aysan u ordaan leexsado Color u gaar ah. Waxan oo dhan ayaa loo arkaa, hadda waxaan ugu danbeysay ee ka ciyaari kara wakhtiga firaaqada kuwa on account of Mar. yimid ee VGBC8, GameBoy ugu horeysay Windows Phone 8-gaar ah / GameBoy Color emulator.
Emulator kasta u baahan yahay inuu raaco a ROM buunbuuninayo lahayn si ay u sharci ah, iyo VGBC8 waa isku mid. Halkan ROM waxaa ka mid ahaa waa suura gal sare duwan ee pong, oo aad u baahan doontaa in aad si deg deg ah masixi. Si aad u hesho kulan dheeraad ah, waxa aad helaysaa si ay u gudbiyaan ROMS kuu gaar ah si ay u SkyDrive, biiri diiwaankaaga si emulator ah, iyo in ka dib markii ay si gaar ah weecinta kasta dejisan. Leexsado lagu baxshay karo, tirtirayaa, iyo xitaa ku xayiran in screen Start mar oo ay tahay in aad maktabadda.
Waxaan guud ahaan uma arkaan in wax weyn oo la leexsado - Sannad ka hor, Windows Phone Central warkii Shooter a 3D boos loo yaqaan Solar Dagaalka lagu lunched doonaa Windows Phone iyo Windows 8. dheeldheel ayaa nagu ay gameplay Starfox-sida qarxay sort of this on Windows Phone. Waxaan kor u horaysa ee la qabto ma waqti dheer ka hor qaadan gander ah ee Windows Phone qabsashada ee dhabta ah ee weecinta.
Waxa uu ku xidhnaan in ay ka dhacaan, si kastaba ha ahaatee Solar Dagaalka ka TegTap waa ugu danbeysay ee la heli karo ee Windows Phone! The Windows 8 duwanaansho waajibka ku ah inay dib markii qaadan mustaqbalka aan si fog. Leexsashada guud ahaan muuqataa af badan yahay sida damaanad qaaday, iyada oo wakiil 3D siman iyo midabkiinaba, xoogna. Waxa si fudud gacanta ku hayso la gacanta ku laabto, taas oo weyn waxay ku sababeeyaan in ay gacanta ku MOGA damaanad Weli ma shaqeeyaan. Waxa ay taageertaa 512 MB qalabka xaq u baxay entryway si kastaba ha ahaatee! Eeg Solar Dagaalka nolosha dhabta ah ee Lumia ee 1520 ee naga gacan-ku xanibaada vide.
Sida loo ha daaqadaha 10 kulan oo aad kaniini
> Resource > Windows > Top 5 Game Emulators for Windows Phone 8